Ahmiyada qiimaynta amarada daahsoon ee lagu guulaysto maamulka Alaabta Kafilan ee Amazon | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Muhiimadda ay leedahay qiimaynta amarada daahsoon ee lagu guulaysto maaraynta Alaabooyinka Kafilan ee Amazon
Muhiimadda ay leedahay qiimaynta amarada daahsoon ee lagu guulaysto maaraynta Alaabooyinka Kafilan ee Amazon
Alaabooyinka la kafaalo qaaday waa qaabka xayaysiisyada raadinta ee ugu ballaaran ee la qaato Amazon, waxayna sida caadiga ah ku xisaabtamaan in ka badan lix jeer in ka badan inta ay ku baxdo xayeysiisyada Brands-ka ee celceliska Tinuiti (loo shaqeeyaha) xayaysiiyaha. Sidan oo kale, aad bay muhiim ugu tahay xayaysiiyayaasha inay fahmaan qiimaha buuxa ee ay xayeysiisyadani wadaan.
Qayb ka mid ah tani waa fahamka wakhtiga guji-si-dalbashada u dhexeeya marka isticmaaluhu uu gujiyo xayeysiiska iyo marka isticmaaluhu dhameeyo beddelka. Marka la eego sida Amazon ay u sifeyso dalabaadka iyo iibinta, waxaa muhiim ah in xayaysiiyayaasha ay leeyihiin fikrad ah sida ugu dhakhsaha badan ee isticmaalayaashu u beddelaan si ay u qiimeeyaan taraafikada waqtiga dhabta ah.
Amazon waxay sifeysaa beddelka iyo iibinta taariikhda xayeysiistii ugu dambeysay ee guji
Marka la qiimaynayo warbixinta waxqabadka ee Alaabta la Kafilo, xayaysiiyayaasha waa in ay ogaadaan in dalabaadka iyo iibinta loo aaneeyay maalin gaar ah ay yihiin kuwa ku xidhan gujin xayeysiis ah oo dhacay maalintaas. Tani waa in la yiraahdo, amarada iyo iibinta la sheegay ma aha oo kaliya kuwa dhacay maalin gaar ah.
Xayeysiyayasha eegaya beddelka badeecadaha la kafaala qaaday iyo iibinta gudaha UI waxay ku xaddidan yihiin kaliya inay arkaan dalabaadkaas iyo iibinta loo aanaynayo toddobada maalmood ee ka dambeeya xayeysiiska gujinta. Si kastaba ha noqotee, suuq-geeyayaasha soo jiidanaya waxqabadka API-ga waxay leeyihiin dabacsanaan weyn waxayna dooran karaan daaqadaha beddelka ee kala duwan hal ilaa soddon maalmood, taas oo ah sida xogta lagu soo daray boostadan la isugu keenay.
Marka laga hadlayo bandhiga la kafaala qaaday iyo ololaha Magacyada la kafaala qaaday, waxqabadka waxa kaliya oo lagu eegi karaa iyadoo la isticmaalayo daaqad beddelasho 14 maalmood ah, iyada oo aan loo eegin haddii lagu arkay UI ama xidhiidhka API.
Suuqgeeyayaasha doonaya inay isticmaalaan daaqada beddelka soddonka maalmood markay cabbirayaan iibka Alaabta la Kafilo iyo beddelka loo nisbeeyo xayeysiiska, tani waxay la macno tahay inay qaadan doonto soddon maalmood ka dib maalinta su'aasha si ay u helaan sawir buuxa dhammaan beddelka Marka la eego guud ahaan xayaysiiyayaasha Tinuiti, 24-kii saacadood ee ugu horreeyay ka dib markii xayeysiis lagu sameeyay ayaa lagu xisaabiyay 77% beddelka iyo 78% iibka dhammaan kuwa dhacay 30 maalmood gudahooda ee xayeysiisku guji Q2 2020.
La yaab ma leh, saamiga isku beddelka-SKU ee dhacaya 24-ka saacadood ee ugu horreeya waa ka sii sarreeyaa, maaddaama dukaamaystayaashu ay aad ugu dhow yihiin inay tixgeliyaan alaabada kale mar kasta oo ay ka sii baxaan xayeysiisyada xayeysiiska.
Celcelis ahaan xayaysiiyaha Amazon, waxaanu ogaanay in in ka badan 20% ee qiimaha loo nisbayn karo xayaysiisyadu ay dhacaan wax ka badan hal maalin kadib gujinta xayaysiiska waxqabadka. Xisaabta waxa uu u eg yahay qiyamkaas dahsoon way ku kala duwan tahay xayaysiiyaha ilaa xayaysiiyaha.
Qodobbada sida qiimaha ayaa saameeya dhererka wareegyada tixgelinta
Waqtiga ay ku qaadato macaamiishu inay tixgeliyaan iibsigu waxay si dabiici ah ugu xidhan yihiin nooca badeecada la tixgeliyo, qiimuhuna waa arrin aad u weyn. Iyadoo la eegayo saamiga 30-ka maalmood ee beddelka ah ee dhacaya in ka badan hal maalin kadib gujinta celceliska qiimaha dalabka (AOV) ee xayeysiistaha, saamigani wuxuu kor u kacayaa marka AOV kor u kaco. Xayeysiyayasha leh AOV in ka badan $50 waxay arkeen 25% dalabaadka ayaa dhacaya in ka badan 24 saacadood ka dib xayeysiisku guji Q2 2020, halka xayaysiiyayaasha AOV ka yar $50 ay arkeen 22% dalabaadka ayaa dhacaya in ka badan 24 saacadood ka dib xayeysiiska guji.
Si fudud u dhig, macaamiishu waxay badiyaa ku qaataan waqti dheer inay tixgeliyaan alaabooyinka qaaliga ah ka hor inta aysan iibsan inta ay ku qaadanayaan inay tixgeliyaan alaabada ka jaban, guud ahaan marka loo eego. Qodobbada kale waxay sidoo kale saameyn karaan inta celceliska guji-to-dalbashada wareegga uu u yahay xayeysiiye gaar ah.
Marka laga soo tago qiimaha nidaamka dahsoon ee uu ku kala duwan yahay xayaysiiyayaasha, waxa kale oo jiri kara isbeddelo macne leh oo ku saabsan sida qiimaha nidaamka dahsoon uu u eg yahay inta lagu jiro xilliyada isbeddelka habdhaqanka macaamilka, sida xilliga fasaxa jiilaalka iyo agagaarka Maalinta Prime.
Maalmaha wax iibsiga ee furaha ah waxay dedejiyaan habka beddelka
Shaxda hoose waxa ay muujinaysaa saamiga maalinlaha ah ee dhammaan beddelaadyada loo nisbeeyo toddobada maalmood gudahood ee xayeysiiska gujinta ee dhacay 24-kii saacadood ee ugu horreeyay. Sida aad arki karto, dalbashada hal maalin ayaa si weyn kor ugu kacday Jimcihii Madow iyo Cyber ​​​​Isniinta iyadoo isticmaalayaashu bilaabeen dukaamaysiga fasaxa (oo ay hoos ugu dhaceen maalmihii u horseeday Jimcaha Madoow).
Maalmihii muhiimka ahaa ka dib, saami-hal-maalin ayaa ku soo noqday heerarkii caadiga ahaa ka hor inta aanay kor u kicin toddobaadyada ka horreeya maalinta Kirismaska ​​ka hor inta aan la gaadhin December 21 heer ka sarreeya xataa waxa lagu arkay Cyber ​​​​Isniinta. Diseembar 21, oo ahayd maalintii ugu dambeysay dukaameeyste badani waxay dareemi karaan kalsooni inay soo gudbiyaan dalabka waqtiga si ay u helaan fasaxa kirismaska, waxayna muujisay sida dhakhsaha leh ee guji-si-iibsiga loogu talagalay xayeysiiyayaal badan.
Dabcan, Amazon waxay abuurtay nooceeda Luulyo ee Cyber ​​​​Isniinta oo ah qaabka Maalinta Ra'iisul Wasaaraha, waxaanan aragnaa isbeddel la mid ah oo ku saabsan wadaagga beddelka hal-maalin ee ku saabsan dhacdada xagaaga sidoo kale.
Maalinta Ra'iisul Wasaaraha ee sanadkan ayaa dib loo dhigay, balse wararka ayaa sheegaya in laga yaabo in munaasabadan cusub ay dhacdo bisha Oktoobar.
Markaan sii galayno Q4, xayaysiiyayaasha waa inay eegaan sida daaqada guji-ku-dalbashada u wareego inta lagu jiro wakhtiyada muhiimka ah ee sanadka si loo aqoonsado xilliyada qiimaha nidaamka qarsooni uga duwanaan karo celceliska.
Sida goob kasta, xayaysiiyayaasha ayaa inta badan xiiseynaya waxqabadkii dhawaa ee Amazon Ads si ay u fahmaan sida maalmo gaar ah faa'iido u leeyihiin. Tani dhab ahaantii waxay muhiim u tahay go'aaminta isbeddelada iyo xaaladaha miisaaniyada dib loo habeynayo ama dadaallada hagaajinta la sameeyo, taasina waa run xitaa hadda marka la eego sida dhakhsaha leh ee waxqabadka iyo noloshu ay isu beddelayaan xayeysiisyo badan iyo sidoo kale dadweynaha guud ahaan.
Si kastaba ha ahaatee, si loo sameeyo si wax ku ool ah, xayaysiiyayaasha waa inay tixgeliyaan dib u dhaca inta badan ka dhaca inta u dhaxaysa gujinta xayeysiiska iyo beddelka. Xataa madal si weyn loo tixgeliyo ka joogsiga kama dambaysta ah ee dukaamaysiga sida Amazon, in ka badan 20% ee 30-maalin beddelaadku waxay dhacaan ka dib saacadaha 24 ee ugu horreeya ee gujinta, saamigani wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya oo loogu talagalay xayaysiiyeyaasha iibiya alaabooyinka leh wareegyo tixgelin dheer.
Intaa waxaa dheer, xayeysiiyayaashu waa inay eegaan waxqabadka taariikhiga ah ee maalmaha muhiimka ah sida Cyber ​​​​Monday iyo Prime Day si ay u fahmaan sida qiyaasahani isu bedeli karaan. Iyada oo ku xidhan nooca badeecada, ciidaha kale sida Maalinta Jacaylka ama Maalinta Hooyada waxa kale oo laga yaabaa inay sababto isbeddelo u kala horreeyaan.
Dhammaan xayaysiiyayaasha daruuri ma rabaan inay qiimeeyaan dhammaan dalabaadka loo nisbeeyo xayeysiiska muddo bil ah (ama xitaa toddobaad-dheer) daaqada sifaynta si isku mid ah, iyo gaar ahaan alaabada leh wareegyada iibsiga degdegga ah, waxay macno samayn kartaa in la isticmaalo daaqad gaaban. Taasi waxay tidhi, xayeysiiyeyaal badan ayaa ka hela qiimaha korodhka ee amarrada dhacaya maalmo ama toddobaadyo laga saaray xayeysiisyada xayeysiiska, iyo fekerka sida iibkan loo qiimeeyo waxay kaa caawin doontaa in la hubiyo in barnaamijkaaga Amazon la hagaajiyo iyadoo la adeegsanayo cabbirrada waxqabadka ugu muhiimsan.
Bitbucket vs GitHub: Kaydka Koodhka Keebaa U Wanagsan Mashaariicda Horumarineed ?
10 siyaabood oo aad uga dhigi karto mareegahaaga mid la heli karo